The Gardener: 2009-07-19
မိုက်ကယ်ဂျက်ဆန် ... မူကွဲ မိုက်ကယ် ကြက်ဆင် (ခ) မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် ဆုံးသွားတာ အတော်လေးကြာပါပြီ ...။ တစ်လပြည့် အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ...တင်တာလားဆိုတော့လည်း မဟုတ်ပါဘူး ...။ ရေးတဲ့သူကလည်း ကိန်းကြီးခမ်းကြီးနိုင်ပါတယ် ...။ သူ့ခမျာလည်း စကင်န်နာလေးတစ်လုံးဝယ်နိုင်ဖို့ တစ်နှစ်လောက် စာရေးရမယ်လို့ ညည်းနေပါတယ် ...။ ၀ယ်ပေးမယ်လို့ ပြောတဲ့ သူတွေဆီကလည်း မျှော်နေပါတယ် ...။ စာကြည့်တိုက်မှာ member လုပ်ဖို့ပါ ပိုပိုလိုလိုလေး ပို့ပေးလိုက်ပါ ....။ စာမရေးတာကြာတဲ့ သူငယ်ချင်းသုံးယောက် တပြိုင်နက် စာပြန်ရေးကြလို့ ၀မ်းသာပါတယ် ...။ အူကြောင်ကြောင် နိုင်တဲ့ ဒီ blog ရဲ့ contributor တစ်ယောက်က ဆီးချို အကြောင်းရေးထားတာလည်း တွေ့လိုက်ပါသေးတယ် ...။ အဆင်ပြေတဲ့ အခါတင်ပါမယ် ...။ မိုး Z ဆိုတဲ့ တစ်ယောက်လည်း contributor လုပ်စားနေတယ်လို့သိရပါတယ် ...။ သူရေးတဲ့ သရပီကိုလည်း အပိုင်းပိုင်းခွဲရေးခြင်း အနုပညာဆိုတဲ့ အထဲမှာ ပေါင်းထည့်ပေးဖို့စဉ်းစားနေပါတယ် ...။ နောက်နေ့တင်မယ့်ပိုစ်က ကုလား သရပီ ဖြစ်ပါတယ် ...။ ရေးတဲ့သူက မိုး Z ပါ ...။ ကိုယ့် ကဗျာတွေကို အဲဒီလောက်မကြိုက်တာ အဲဒီတစ်ယောက်ပဲတွေ့ဖူးပါတယ် ....။ ကဗျာ တစ်ပိုဒ်သုံးသွားတဲ့ အတွက်လည်း သူ့ကို တရားစွဲဖို့ စီစဉ်နေပါတယ် ...။
ပိုက်ဆံရှာရတာ ခက်ပါတယ် ...လို့ အားတဲ့အခါ အကြိမ် ၁၀၀၀ လောက်ညည်းချင်ပါသေးတယ် ....။ လောလောဆယ်တော့ မအားသေးတာနဲ့မညည်းသေးပါဘူး ...။ အခုနေများ ပထမဆုံး ငွေကြေးကို တီထွင်တဲ့သူနဲ့ ပထမဆုံး ကွန်ပြူတာကို တီထွင်တဲ့သူတွေများတွေ့ရင် ဖိုးစိန်ဆီဖမ်းပို့ပြီး fillet လုပ်ခိုင်းမိမယ်ထင်ပါတယ် ...။ ဖြစ်နိုင်ရင် ... ပလာတာရောင်းချင်တာ ... မဖြစ်နိုင်သေးလို့ ... လုပ်လို့ရတာလုပ်နေတုန်းပါပဲ ...။
... မဂ္ဂဇင်းတိုက်မှာ လက်တိုလက်တောင်းလည်းမလိုသေးဘူးဆိုတာနဲ့ မြန်မာပြည်မပြန်ဖြစ်သေးဘူး ...။ ... ထီပေါက်ရင် ပေးမယ့် အမွေကို မျှော်ရင်း ... ပိုက်ဆံရမယ့် စာတွေကို ရေးရင်း သဟဇာတ မဖြစ်နိုင်ခြင်းတွေကို သပ်သပ်ရပ်ရပ် စုပုံထားပါတယ် ...။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် (နာမည်ကြီးရောဂါတွေမပါ) ပိုက်ဆံပြည့်သွားတဲ့ အခါ စကင်န်နာ တစ်လုံးဝယ်ပါမယ် ...။ ဘ၀မှာ ပထမဆုံးမက်ဖူးတဲ့ အိပ်မက်လို ... စကင်န်နာဝယ်ဖို့ အိပ်မက်မက်နေပါတယ် ..။ .... ဘ၀မှာ စကင်နာတစ်လုံးတော့ ၀ယ်နိုင်ခဲ့ချင်လိုက်တာ ....။ :P
အမေပြုံးနေရင် ပျော်နေတတ်တဲ့သားတစ်ယောက် ... အမေ့အပြုံးတွေရဖို့ ရေးပေးတဲ့စာ ...။ ။
သူဟာ ငြိမ်းချမ်းခြင်းကို အိမ်မက်မက်ခဲ့တဲ့လူငယ်လေးတစ်ယောက်ပေါ့ ...
သူဟာ ... ဂီတနဲ့ နှလုံးသားတွေကို ကုသခြင်းပေးခဲ့တဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက်ပေါ့ ...
သူဟာ ... ဆန်းပြားတဲ့ ကကွက်တွေနဲ့ ... ကမ္ဘာမြေသားတွေအတွက် ကမ္ဘာမြေသီချင်းတွေဆိုခဲ့တဲ့လူငယ်လေးတစ်ယောက်ပေါ့ ...
သူဟာ ... ပြာလွင်နေတဲ့ သံစဉ်တွေနဲ့ သွေးမြေကျမှုတွေကို ရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့လူငယ်လေးတစ်ယောက်ပေါ့ ....
သူဟာ ... လူတိုင်းရဲ့ စိတ်ကို သီချင်းတွေနဲ့လွှမ်းခြုံပေးခဲ့တဲ့လူငယ်လေးတစ်ယောက်ပေါ့ ...
အခုတော့ သူဟာ ... သူမြတ်နိုးတဲ့ ငြိမ်းချမ်းခြင်းခရီးကို ဂီတ၀ိညာဉ်တစ်ခုတည်းလွယ်ပိုးပြီး ...ခရီးပြင်းနှင်သွားနှင့်ပါပြီ ...။
သူချန်ထားရစ်ခဲ့တဲ့ .... အိမ်မက်တွေကို ဆက်စပ်ကြည့်မိတော့ ...
သူစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှုတွေ ... ၀ါဝင်းစိုပြေနေတာကိုတွေ့တယ် ....
ငြိမ်းချမ်းခြင်းခရီးသွားလေးရဲ့ ... ချန်ထားခဲ့တဲ့လက်ဆောင်လေးတွေ ... ၀ါဝင်းစိုပြေနေလေရဲ့ ...။ ။
နာကျင်စေတတ်တဲ့ နာရီသံတချက်ချက်ဟာ .... ဆက်လက်စီးဆင်းနေခဲ့တယ် ....
အသားအရောင်ခွဲခြားမှုကိုဆန့်ကျင်ခဲ့သူ ... အဖြူလားအမည်းလား(Black Or White)သီချင်း လေးက စိတ်ထဲကိုတိုးတိုးလေး ၀င်လာပြန်တယ်....။ ကိုယ့်ညီအကိုချင်းဆိုရင် ဖြူဖြူမည်းမည်း ဒါဟာကိစ္စမရှိပါဘူးလို့ သူဆိုနေတယ်... ကိုယ့်သားသမီးလို့တွေးကြည့်ရင် ဒီအဖြူအမည်းကိစက ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးလို့သူဆိုနေတယ် ... ခွန်အားအပြည့်သုံးရတဲ့ ကကွက်တွေနဲ့ သူ့ရဲ့ အသားအရောင်ခွဲခြားမှုကို ဆန့်ကျင်တဲ့ အတွင်းစိတ်ကို သူထုတ်ဖော်ခဲ့တယ် ....။ ... အသားအရောင်ခွဲခြားမှုကြောင့် အမေရိကန် သမိုင်းတလျှောက်မှာ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေ အနာဖေးမတက်နိုင်တဲ့ သောကတွေကို သူမျှဝေခဲ့နားလည်ပေးခဲ့တယ် .... သူ့ရင်တွင်းက ဒဏ်ရာ နဲ့ ဘ၀တူတွေရဲ့ ဒဏ်ရာကို နာကျင်မှုကနေ သီချင်းတစ်ပုဒ် အဖြစ်ပြောင်းလဲပစ်ခဲ့တယ် ...။ သူဟာ လူမည်းတွေရဲ့ ရင်တွင်းက အသံကို ကမ္ဘာကို ပဲ့တင်ထပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ သူရဲကောင်းတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ် ...။
ညင်သာတဲ့ အကြမ်းဖက်မှု (Smooth Criminal) သီချင်းလေးဆိုညည်းရင်း ကမ္ဘာကြီးရဲ့ တိတ်ဆိတ်မှုကို တချွင်ချွင် မြည်စေခဲ့တဲ့သူ ... အဆင်ပြေရဲ့လားချစ်သူရေ ... လို့ စကားနည်းတဲ့ ကမ္ဘာကို ထပ်ခါတလဲလဲ မေးသွားတဲ့သူ ... ကမ္ဘာကြီးရဲ့ဆွဲငင်အားကို အသုံးပြုတဲ့ကကွက် တစ်ခုနဲ့ သူချစ်မက်တဲ့ ကမ္ဘာနဲ့ သူနဲ့ကြားက ရင်းနှီးမှုကို ထုတ်ဖော်သွားခဲ့သူ ...။ လူလူချင်း ရိုးရိုးလေးရက်စက်နေတဲ့ ကမ္ဘာထဲကို သူ အဖြူရောင်ဝတ် ဧည့်သည်တစ်ယောက်လို ၀င်ရောက်လာခဲ့တယ် ...။ သူ ရက်စက်သတ်ဖြတ်မှုတွေကြားမှာ သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ပါဝင်လိုက်ပြန်တယ် ... အဆင်ပြေရဲ့လားလို့ ချစ်ခင်သူတွေကို တဖွဖွမေးရင်း သွေးစွန်းနေတဲ့သူတွေကို ပစ်ခတ်ပြန်တယ် ... နောက်ဆုံး သူ ပြေးထွက်သွားပြန်တယ် ... .... အခုလည်း သူပြေးထွက်သွားပြန်ပြီလေ.... ညင်သာတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ တံခါးတခုသာ ဆိတ်ငြိမ်စွာထီးထီးမားမားရပ်နေခဲ့တော့တယ် ...။
အနိုင်အရှုံးအတွက်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လောကထဲမှာ ... ဘယ်သူမှမရှုံးချင်ကြဘူး ... ပြေးဟေ့ ... ပြေးဟေ့ ...(Beat it) လို့ တပ်လှန့်နေတဲ့လူငယ်လေး တစ်ယောက်လည်းသူဖြစ်ခဲ့တယ် .... အာဃာတနဲ့ဝေးရာက ပြေးခိုင်းနေတဲ့ လူငယ်လေး .. ရန်သူတွေကို အတူကစေချင်တဲ့ လူငယ်လေး ... သူ့အိမ်မက်တွေက မြင့်မားလွန်းခဲ့တယ် ... ဘယ်သူမှန်မှန် ၊ ဘယ်သူမှားမှား ပြေးသာပြေး တဲ့ ... သူက ငြိမ်းချမ်းရေးကို ပြေးပြီးသွားယူစေချင်တဲ့သူလေလား .... အခုလည်း ဒီလူငယ်လေးဟာ ရောက်လေရာဘုံဘ၀တစ်ခုမှာ ဒီသီချင်းလေးကို ဆိုပြနေဦးမှာပါ ... ဘယ်သူကမှ မရှုံးချင်ဘူး ... ပြေးဟေ့ ... ပြေး .....၊ သူ့အသံမှာ သူ့လားရာကို ကြားရလိမ့်မယ် ... သူ့ကဟန်မှာ သူ့အိမ်မက်ကို မြင်ရလိမ့်မယ် .... သိပ်ကိုသေချာပါတယ် ... သူပြေးနေဆဲ ...။
ထောင်သားဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့လူငယ်လေးတစ်ယောက်အဖြစ် သူပေါ်လာပြန်တယ် ....။ မြူးကြွတဲ့ စည်းချက်တွေမစခင် ... ငိုကြွေးနေတဲ့ ကလေးရဲ့အသံနဲ့ စတင်ခဲ့တယ် ....။ အဲဒီအသံက နှလုံးသားတိုင်းကို ရိုက်ချိုးဝင်ရောက်လာတယ် ... တစ်နေရာရာမှာ ငတ်မွတ်နေတယ် ... တနေရာရာမှာ ဒုက္ခဆင်းရဲခံနေရတယ် ... လူတွေ က စစ်ပွဲတွေကိုဖန်တီးနေတယ် .... သူ လွတ်လပ်မှုကိုရူးသွပ်စွာအော်ဟစ်ပြောဆိုနေတယ် .... သူတို့တွေဟာ ငါတို့ကို ဂရုမစိုက်ကြပါဘူးတဲ့ ...(They don't care about us). ကြေကွဲနာကျင်နေတဲ့အသံကို သူနှလုံးသားကနေ နှလုံးသားကို တိုက်ရိုက်ခေါ်ဆိုနေတယ် ...။ မာတင်လူသာရှိရင်လည်း ဒါတွေဖြစ်ပျက်နေတာကို ခွင့်ပြုနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ .. သူ့ရင်ထဲက စစ်ပွဲတွေကို ချိတ်ပိတ် စုသိမ်းချင်မှုကို အော်ဟစ်နေတယ် ... ရှိသမျှ အသံနဲ့ ကြားနိုင်သလောက်ကြားအောင်အော်နေတယ် ... ဒါဟာ ... ငြိမ်းချမ်းမှုကို အော်ဟစ်တဲ့ ဂီတသမားလေးပေါ့ ... သူ့ရဲ့နာကျင်ကြေကွဲနေတဲ့ အသံ .. သူတို့တွေဟာ ငါတို့ကို ဂရုမစိုက်ကြပါဘူး ... ငါပြောချင်တာ အားလုံးစုလိုက်ရင် တစ်ခုပဲ ... သူတို့တွေဟာ ငါတို့ကို ဂရုမစိုက်ကြပါဘူးတဲ့ ...။
ကမ္ဘာမြေသီချင်း (Earth Song)က ... အကြိမ်ကြိမ်ဖတ်ဖြစ်တဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်လို စီးဆင်းလာပြန်တယ် ....
ကမ္ဘာကြီးကို ငါတို့ဘယ်လိုတွေလုပ်ခဲ့တာလဲ ..
ကြည့်ပါ .. ငါတို့လုပ်ခဲ့တာတွေကို ကြည့်ပါ ...
မင်းရဲ့ တဦးတည်းသော သားလေးအပေါ်မှာကတိထားတဲ့ ...
ငါနဲ့မင်းအတွက် ဆိုတဲ့ အိမ်မက်တွေအားလုံးရောဘယ်လိုလဲ ...
မင်း သတိပြုမိဖို့ ရပ်တန့်ချိန်လေးရရဲ့လား ...
ငိုနေတဲ့ ကမ္ဘာနဲ့ ငိုကြွေးရှိုက်ငင်နေတဲ့ ကမ်းခြေတွေကို
သတိပြုမိဖို့ မင်းရပ်တန့်ချိန်လေးရရဲ့လား ....
လူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ကြေကွဲမှုတွေဟာ ပေါင်းဆုံသွားတယ် ...
လူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ဒဏ်ရာဟာ ပေါင်းဆုံသွားတယ် ...
လူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ရက်စက်မှုဟာပေါင်းဆုံသွားတယ် ...
လူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ လစ်လျူရှူမှုဟာပေါင်းဆုံသွားတယ် ...
လူတစ်ယောင်ချင်းစီရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ သောကဟာ ပေါင်းဆုံသွားတယ် ....
နိမိတ်ပုံတွေနဲ့ပြသထားတဲ့ ဂီတဟာရက်စက်စွာနဲ့လှပနေတယ် .... နာကျင်စွာနဲ့ သင်ခန်းစာပေးနေတယ် ... လူတစ်ယောက်စီ ၀ိုင်းသတ်နေရင် ကမ္ဘာလည်းသေနိုင်တယ် .... လူတစ်ယောက်စီ ၀ိုင်းငြှိမ်းရင် စစ်မီးတွေလည်းငြိမ်းနိုင်တယ် ....။ .... အရာရာ ပြန်လည်ကောင်းမွန်သွားမယ့်နေ့လေးတစ်နေ့ရောက်ဖို့ အားလုံးဆန္ဒပြုနေတဲ့ပုံဟာ အိမ်မက်တွေကိုအသက်သွင်းနေလေရဲ့ ... ငြိမ်းချမ်းမှုကိုဆာလောင်နေတဲ့သူတွေရဲ့ အိမ်မက်တွေဟာ လှပစွာပြည့်စုံသွားမယ်လို့ ဖော်ကျူးသွားတဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက် ... ကမ္ဘာမြေကို နှုတ်ဆက်သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို တိုးတိုးလေး ဆိုညည်းသွားခဲ့လေမလား ...။
အဲဒါဟာ အချစ်ဆိုတဲ့အရာ ဆိုတာငါသိပါရဲ့ ...
ငိုစရာမလိုတော့တာကို တွေ့ရလိမ့်မယ် ...
မင်းနာကျင်မှုနဲ့ ပူဆွေးဝမ်းနည်းမှု မရှိတာကို ခံစားနားလည်လာလိမ့်မယ်
ကမ္ဘာကြီးကို ကုသကြမယ် ..
ပိုကောင်းတဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်လာစေမယ် ..
မင်း ရှင်သန်ခြင်းကို အလေးထားရင် ...
မင်း နဲ့ ငါ့အတွက် ..
(ကမ္ဘာကြီးကို) ပိုကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါ ....
အဲဒီလိုသူကHeal the world သီချင်းလေးနဲ့ အားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်တယ် ...။ ... ကလေးတွေရဲ့ရင်ထဲကို ကမ္ဘာကိုချစ်တဲ့စိတ်လေးအမွေပေးခဲ့တယ် ....။ .... အခုလည်းသူ ... ဆက်လက်တောင်းဆိုနေတုန်းပါပဲ ... တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ သစ်ရွက်တစ်ရွက်ရဲ့ အရည်ပြားပေါ်မှာ ... ကြွေကျထားတဲ့ ပန်းတစ်ပွင့်ရဲ့ နရီစည်းချက်ထဲမှာ ... တသွင်သွင်စီးနေတဲ့ စမ်ချောင်းလေးရဲ့ နှလုံးသွေးထဲမှာ ... သူဆက်လက်တောင်းဆိုနေနေဆဲပါပဲ ...။
မင်း ငါ့ကို နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်လို့မပြောခဲ့ဘူး ...
တစ်ယောက်ယောက် ငါ့ကိုပြောကြပါ ...
ငါ့ကမ္ဘာလေး အေးစက်စွာကျန်ရစ်နေခဲ့ .....
ငါတို့တွေ သိပ်ဝေးနေကြပေမယ့် ...
ငါ ဒီမှာရှိနေတယ် ..
........ You are not alone သီချင်းသံလေးသာ လွင့်ပျံ့နေတော့တယ် ..... ဝေးကွာသွားတဲ့သူတွေကိုရင်ထဲမှာ နီးလိုက်ပါလို့ မှာသွားတဲ့လူငယ်လေးတစ်ယောက် သူချစ်တဲ့သူတွေကို နှလုံးသားထဲကို ထည့်သွင်းသယ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီလား ....။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကမ္ဘာမြေကိုနင့်နင့်သည်းသည်းချစ်ခဲ့သူတစ်ယောက်ကို ကမ္ဘာမြေက နွေးနွေးထွေးထွေး ထွေးပွေ့ထားပါလိမ့်မယ် ...။ အလုပဆုံးအိမ်မက်တွေကိုမက်ခဲ့တဲ့လူငယ်လေး ... ခေတ်တစ်ခေတ်ကို ဂီတနဲ့ထူထောင်ခဲ့တဲ့ သူရဲကောင်းတစ်ယောက် .... သူစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းခြင်းဂီတတွေဟာ ဆက်လက်သီးပွင့်နေပါလိမ့်မယ် ... သူယုံကြည်မျှော်လင့်ခဲ့တဲ့ ... ပိုကောင်းတဲ့ ကမ္ဘာတစ်ခု ရနိုင်ရောက်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ....
Rest In Peace, MICHAEL .
(မှတ်ချက် ။ ။ကွင်းစ ကွင်းပိတ်နဲ့ ရေးထားတာ သေပြီလို့ မဆိုလိုပါဘူး ...။ :) )
Thank you so much my white rainbow for encouraging me to write ...
Mom, I wish I could make you happy throughout your life ...